भीम खवासको संस्मरणात्मक कृति ‘नबिर्सेका दिनहरु’ लोकार्पण « Sajilo Khabar
भीम खवासको संस्मरणात्मक कृति ‘नबिर्सेका दिनहरु’ लोकार्पण
मेचीनगर, ८ जेष्ठ । नेकपा एमालेका केन्द्रीय सल्लाहकार एवम् पूर्व शिक्षक भीम खवासको संस्मरणात्मक कृति ‘नबिर्सेका दिनहरु’ आज लोकार्पण भएको छ ।
उनले बाल्यकाल, शिक्षककाल, राजनीतिक संघर्षकाल र अन्य सामाजिक कालखण्डमा भोगेका अनुभूति किताबमा जस्ताको तस्तै अभिब्यक्त गरेका छन् ।
वरिष्ठ साहित्यकार कोमलप्रसाद पोखरेलले आयोजित एक कार्यक्रमबीच कृतिको लोकार्पण गरेका थिए ।
सो कार्यक्रममा समालोचक तारा विविध र दामोदर ढुंगेलले कृतिको समीक्षा प्रस्तुत गरेका थिए भने प्राज्ञ सुभद्रा अर्याल, साहित्यकार पुण्यप्रसाद खरेल, अग्रज पत्रकार चन्द्र भण्डारी र लेखक निरज कट्टेल शुभकामना मन्तब्य राखेका थिए ।
समीक्षक तारा विविधका अनुसार कृतिले लेखकको बाल्यकाल, ज्यामिरगढीको बसाइ, धरानको आइएस्सी अध्ययन, लालझोडा स्कुलको अध्यापन लगायत विभिन्न समयखण्डका सत्यतथ्य भोगाइ बाहिर ल्याएको छ ।
त्यसैगरी अर्का समीक्षक दामोदर ढुंगेलका अनुसार स्रष्टा आफैमा राजनीतिक आन्दोलनमा सक्रिय संगठक भएको र उनी झापा विद्रोहकालको जानकार रहेको उल्लेख गर्दै कृतिमा झापा विद्रोहको अपेक्षा गरिएभन्दा कम विवरण बाहिर ल्याइएको गुनसो गरेका छन् ।
उक्त किताबमा पृष्ठभूमि, बाल्यकाल, शैक्षिक, अध्यापकीय, राजनीतिक र सामाजिक गरी ६ वटा खण्ड छन् । त्यसभित्र इतिहासका भिन्न घटनाहरु लेखिएका छन् । रंगीन कभर र स्तरीय कागजमा छापिएको यो कृतिको मूल्य पाँच सय रुपैयाँ उल्लेख छ ।
शिक्षिका शीला खवासले सञ्चालन गरेको कार्यक्रममा स्रष्टा भीम खवासले कृति लेखनका विषयमा आफ्ना अनुभूति सुनाएका थिए ।
सोर्स लगाएर छात्रवृत्ति
काठमाडौँ, १९ जेठ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सहसचिव दीपक शर्माको डायरीका हरेक पानामा
एक महिनाभित्र विद्यार्थीको हातहातमा पाठ्यपुस्तक पुर्‍याउन सरकारलाई निर्देशन
काठमाडौँ, ११ जेष्ठ । संसदीय समितिले विद्यालय तहको पाठ्यपुस्तकको बाँकी छपाइ एक महिनाभित्र सम्पन्न गरी
खै ! नेता ज्यु माहिलो छुटेछ!
माहिलो हिजो नेतासँगै जेल बसेछ कैयौं झुपडीमा सँगै संगठन गरेछ । पार्टीको मोर्चामा अघिपछि लागेछ
मनाङ जिल्लाबाट ४३ जना विद्यार्थी एसइईमा सहभागी हुँदै
मनाङ, ५ वैशाख । आउँदो शुक्रबारदेखि सुरु हुने माध्यमिक शिक्षा परीक्षा ९एसइई० मा हिमाल पारीको